Guryaha dadka waayeelka
Waxa ay Folkhälsomyndigheten soo rogi kartaa mamnuucidda booqashada ee maxaliga/meelaha qaar u gaarka ah ee guryaha waayeelka. Meelaha mumnuucida booqashooyinka maxaliga/meelaha qaar u gaarka ah lagu soo rogay ayaa waxqabadku uu awoodi doonaa inuu sameeyo kiisas/waxyaabo ka reeban oo uu tusaale ahaan u oggolaado booqashooyinka sayga, xaaska/oorida iyo lammaanaha. Waxa uu xeerka u oggolaanaaya amarka xayiraaddu dhaqangalayaa taariikhda 21 Noofembar isagoo shaqeynaaya ilaa iyo febraayo 2021 sida laga soo xigteyregeringen. (Macluumaadku waxa uu ku qoran yahay Iswiidhish)
La xiriir guriga waayeelka ee ay khuseyso si aad ugu ogaato waxa booqashooyinka khuseeya. Qofka waxqabadka wada ayaa mas'uul ka ah inuu hubiyo inaanu fayrusku soo galin oo uuna dadka degan iyo shaqaalaha ku faafin. Dadka qaraabada iyo dadka degan ayaa sidoo kale mas'uul ka ah si loogu xadido faafitaanka fayruska iyo raacitaanka taloda guud.
Folkhälsomyndigheten waxyaalaha ku saabsan si looga hortago faafitaanka marka la booqanaayo guryaha dadka waayeelka (macluumaadku waxa uu ku qoran yahay Iswiidhish)